INkonzo yabaThengi elula
NgoMgqibelo, Agasti 26, 2006 NgoLwesibini, Septemba 1, 2015 Douglas Karr
Yikholwe okanye ungakholelwa, ayisoloko iyintengiso, iiBlogs, iiMiyalezo eziNtsholongwane, njl. Ngamanye amaxesha iba yinkonzo enkulu kubathengi. Ndinewotshi yeFossil ekufutshane kwaye endiyithandayo kuba abantwana bam bayithengele mna usuku olunye lokuzalwa. Ndiyathemba ukuba ihlala ngonaphakade. Ibhetri ihlala unyaka okanye emibini. Ibhetri yam iphelile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kodwa bendihlala ndinxibe iwotshi. Kuvakala uhlobo lwesidenge kodwa ndiyenzile kuba